Ụmụọrụ Intanet - Pulpit Preview
Mark abụrụla onye ụkọchukwu Pulpit na Chọọchị Ọtọdọks Austinville kemgbe 1994. O nwere ogo site na Mahadum Freed-Hardeman, Mahadum Lipscomb na Ụlọ Nzukọ Kọgharịrị. Mgbe ọ nọ na FHU, ọ bụ onye gụrụ akwụkwọ nkuzi Guy N. Woods maka ikwusa ozi ọma. Ọ kụziiri ihe ọmụmụ Bible dị na mahadum Bear Valley, Institute of Christian International, na Mahadum Faulkner. O meela ọrụ ozi na Caribbean Islands na Eastern Europe. Ọ na-akụzi na ikwusa ozi ọma na Ukraine n'afọ ọ bụla. Ọ na-ekwusa ozi ọma na nzukọ anọ na isii na-enwe kwa afọ ma na-ekwu okwu na nkwurịta okwu na òtù ụmụnna. Ọ bụ onye nduzi nke ngalaba Morgan County na Maywood Christian Camp na Hamilton, AL ma na-eje ozi na ụlọ ọrụ ndụmọdụ. Ọ na-arụkọ ọrụ nke ọma na usoro Lads na ndị isi.
Uzo asaa nke Ịhụnanya!
Ka Chineke buru Otuto-Ihe ukwu O meworo!
Ihe Mere Anyị Ji Kwesị Ịtụ Egwu Chineke!
Otu esi esi wuo Obodo ndi di ike!